हिलो के हो र यो कसरी बनेको छ? नेटवर्क मौसम विज्ञान
माटोको वर्षा भनेको के हो र यो कसरी गठन हुन्छ?
पक्कै पनि तपाईं एक साक्षी छ माटो स्नान। शहर भनिन्छ जब बरसात पछि माटो र बालुवाको सतही तहमा समाहित हुन्छन्। सामान्यतया भन्नुपर्दा, यो क्षेत्रमा वर्षा हुन्छ कि हावा र भूमि दुवै शुद्ध र सफा छन्। जे होस्, यी वर्षाको समयमा सबै भन्दा पहिलेको भन्दा धुलो छ। र यो यो हो कि यी घटनाहरू माटोले भरिएका कारहरू छोड्नका लागि परिचित छन्।
के तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ किन हिलोको वर्षा हुन्छ र तिनीहरू प्राय: कहिले हुन्छन्?
1 किन हिलो मैस्ट हुन्छ
2 अवक्षेपण विश्लेषण
3 नकरात्मक प्रभावहरू
किन हिलो मैस्ट हुन्छ
वसन्त र गर्मीमा यी वर्षाहरू धेरै सामान्य हुन्छन्। यद्यपि यो एक मौसम विज्ञान सम्बन्धी घटना हो जुन वर्षको कुनै पनि समयमा आउन सक्छ। यो स्पेनको लागि यसको स्थानको कारण लगभग अनौंठो कुरा हो। उनीहरू किन हुनुको कारण अफ्रिकी धूलोमा छ। सहारा मरुभूमि तुलनात्मक रूपमा इबेरियन प्रायद्वीपको नजिक छ। यसले शक्तिशाली हावाले हाम्रो देशमा सबै धूल विस्थापन गर्दछ।
जब आकाशमा वायुवाती धुलोले हाइग्रोस्कोपिक सघन घन केन्द्रकको रूपमा कार्य गर्दछ, यसले वर्षा बादलहरूको गठनमा योगदान गर्दछ। वायुमण्डलीय अस्थिरता र हवाइले बदल्ने हावासँग मिल्दो, यी हिलोको वर्षाको सूत्र पूरा भयो। जब यी वर्षा लाग्छ, दुबै आकाश र कारहरू कालो र colors र माटोले रंगिन्छ।
तिनीहरूलाई केही ठाउँमा "रगतका वर्षा" पनि भनिन्छ। किनभने यो तातो मौसममा, पानी माटोले सानो रातो रंग प्राप्त गर्न सक्छ। वर्षाको यी भागहरूमा सहारा र स्पेनको हावाको गुणस्तरमा यसको प्रभावको बारेमा धेरै कुरा भइरहेको छ।
र यो यो हो कि मरुभूमि निरन्तर छ हाम्रो हावामा धुलोको परिचय दिदै। वायु शासन र यसको तीव्रतामा निर्भर गर्दछ, स्पेनमा प्रवेश गर्ने धुलोको मात्रा बढी वा कम छ।
यी वर्षा सामान्यतया उपग्रह छवि को लागी अनुमान गर्न सकिन्छ धन्यवाद। उपग्रहबाट प्राप्त छविहरूका साथ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ डिप्रेशनको सर्पले धुलोको बादल तान्दै। जब वायुमण्डलीय चाप एक ठाउँमा कम हुन्छ, वायु त्यो कम दबाव क्षेत्रको वरिपरि सर्नेछ। यो तब हो जब हामी अर्ध गोलार्धमा निर्भर गर्दछौं जहाँ हामी छौं, त्यसले भने कि वायु कम सर्कल क्षेत्रको घेरामा वा घडीको दिशामा सर्दछ।
फोहोर वर्षा यो केवल एक पटक हुनुपर्दैनतर यो केही दिनसम्म रहन सक्छ। यी सबै हावाको दिशा र दिशामा निर्भर गर्दछ। यदि वर्षा बादलले बनेको वायुमण्डलीय अस्थिरता धेरै दिनसम्म जारी रह्यो र बतासले अझ बढी सहारन धुलो ल्याउँदछ भने, वर्षा हुने सबै माटो हुनेछन्।
सामान्यतया, क्षेत्र माचिएको वर्षाबाट बढी प्रभावित छ Andalusia मा छन्। यो अफ्रिकी महाद्वीपको नजिकको कारण हो। तिनीहरू मध्य क्षेत्रहरुमा र स्पेनको उत्तरमा पनि देख्न सकिन्छ, तर कम फ्रिक्वेन्सी र गहनताका साथ। त्यहाँ जति धेरै दूरी छ, यो कम हुने सम्भावना कम छ।
माटो नुहाउने प्रभावहरू कार चाँदमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। यीको एक एपिसोड पछि, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि रyed्गिएका र cars्ग कारहरू कसरी देखिन्छन्। यस्तो देखिन्छ कि उनीहरू गएका छन् माटोको दलदल.
कुरा कारमा मात्र होईन तर फुटपाथ र रूखका पातहरूमा पनि देखिन सकिन्छ। यदि ती दिनहरूमा तपाईंले आकाशमा हेर्नुभयो भने, तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि बादलहरूको स्वर सेतो छैन, बरु बादलको रंगमा लिन्छ।
गर्मीमा हुँदा यी बर्षाले पार्ने असरहरूमध्ये एक हो तापमानको बृद्धि। यो किनभने सहाराको धूलोले ल्याउने वायु प्रायद्वीपको भन्दा चर्को छ।
यो घटना वर्षको कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। यद्यपि यो ग्रीष्म springतु र वसन्त महिनाहरूमा बढी सामान्य हुन्छ। सामान्यतया वातावरणमा धुलो को निलम्बन यो २ and र hours० घण्टा बीचमा रहन सक्छ। त्यस पछि, यो हराउन थाल्छ।
तपाईंलाई ध्यान राख्नु पर्छ कि संसारभरिका dust०% धूलो सहारा मरुभूमिबाट आउँछन्। यो ग्रहको इकोसिस्टममा यसको प्रभाव जान्नको लागि खातामा लिनको लागि सूचनाको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो।
यो माटोले हाम्रो सडक र कारहरूलाई मात्र फोहर बनाउँदैन, तर भूमि र समुद्रमा पौष्टिक तत्व पनि दिन्छ। निलम्बित खनिज, ब्याक्टेरिया, बीजाणु र परागहरू साथै धुलो र उप-सहारा बालुवा। समग्रमा, उनीहरूले अत्यधिक सम्भावित स्थानहरूमा पुग्न ठूला दूरीहरू पार गर्न प्रबन्ध गर्छन्। जस्तै, उदाहरण को लागी तपाईको सोफा मुनि वा युरोपियन महाद्वीप भित्र हजारौं किलोमिटर टाढा।
म आशा गर्छु कि अब तपाईं यी घटनाहरू हुनुको कारण जान्न सक्षम हुनुभएको छ 🙂
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम घटनाहरू » माटोको वर्षा भनेको के हो र यो कसरी गठन हुन्छ?
हिमनद र हिमयुग
के हो र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तले कसरी काम गर्छ?